Zeva | Indlu encinci emazantsi eHlathi
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguJan & Ivana
Senza iikharavani zomthi ezingaphelelwa lixesha, ezizama ukufaka isandla ekukhuselweni kwendalo kunye nendlela yazo ezinzileyo, kwaye, ekugqibeleni, ngokubuyisela umntu kwindalo.
Emazantsi amahlathi, apho siqeshe inqwelwana erhuqwayo, kukho inzolo enyulu yaye indlu encinane igxininisa umoya wombongo waloo mmandla.
Kwiindawo ezinjalo, into yokuqala umntu ayibonayo emva kokuvuka kusasa yinyamakazi kanye ngaphandle kwefestile okanye, ebusuku, isibhakabhaka esizele ziinkwenkwezi phezulu.
Uyilo olulodwa lwendlu encinci enamavili ngasehlathini. Siyilwe ukudala indawo eyaneleyo yemizuzu kunye, uthando lwesibini kunye nokuphumla.
Izinto zendalo, iphunga lomthi, okanye ilitye lomlilo lizabalazela ukuhlala kakuhle kunye nokubandakanyeka kwazo zonke iimvakalelo. Iifestile zesiFrentshi zikuvumela ukuba ujonge indalo ejikelezileyo ngokuthe ngqo kwibhedi enkulu etofotofo ngelixa usela isiselo osithandayo.
Kufuphi na amahlathi eentaba zePodkrkonoší ezimema ukuhamba kunye nokukha amakhowa, ukhenketho lwendalo kunye neembono zeGiant Mountains, indawo yokuhambela kunye necawa enhle, iinqaba, iinqaba zokubukela, i-safaris e-Dvůr Králové okanye i-wellness ekufuphi kwi-peat spa.
Iquka ikofu, iti, ioli, iziqholo kunye ne-oatmeal.
KWATHENI SAKHE INDLU ENCINCI?
Sihlala kwisixeko kwaye impembelelo yokuzaliseka kwendlu encinci yayingumnqweno wendlela yokuphila ezimeleyo, ukwakha into kwaye usondele kwindalo.
Sikholelwa ukuba asodwa, abathi ngamanye amaxesha bathande ukuphuma ngaphandle kwesixeko kwaye bafumane iindawo ezifihliweyo ezihlala zinika iinkumbulo ezimnandi ezingalindelekanga. Ke ngoko, ngokoyilo lwethu, siyile kwaye sakha iprototype yekhaya elihambahambayo, elivumela iindawo ezifanayo ukuba zazi abanye abantu abanengqondo efanayo.
Siyathanda ukuchitha ixesha kumoya omtsha kwindalo, yiyo loo nto umcimbi wozinzo ubalulekile nakuthi. Iqokobhe elingaphandle likhuselwe yindlela yaseJapan yokwenza ulusu ngaphandle kokusebenzisa ipeyinti yemichiza. Kubalulekile kuthi ukuba indlu yethu encinci inempembelelo encinci kwimeko engqongileyo. Uphahla olumise ngokukodwa luqokelela ubuninzi bamanzi emvula, aphinda asetyenziswe, umzekelo, ukugungxula izindlu zangasese okanye ukunkcenkceshela izityalo ezijikelezileyo.
Amandla elanga ayenza ikwazi ukuzimela kwaye, ngenxa yokuhamba kwayo, ayishiyi mkhondo kumhlaba apho ikhoyo. Izibane kunye neepompo zamanzi zisebenza ngokuzimeleyo ngokupheleleyo. Oku kuyasithakazelisa rhoqo xa siqala amanzi okanye sifunda incwadi ngaphambi kokulala. Siyifumana ilungile.
Siyakuvuyela ukwabelana nawe ngamava anjalo.
UIvana kunye noJan
Umbuki zindwendwe ngu- Jan & Ivana
UJan & Ivana yi-Superhost